जयनगर–जनकपुर ब्रोडगेज रेल मंसिरबाट, कस्ले गर्ने निरन्तरताको प्रतिबद्धता ? – Mission Khabar
जयनगर–जनकपुर ब्रोडगेज रेल मंसिरबाट, कस्ले गर्ने निरन्तरताको प्रतिबद्धता ?
मिसन खबर २५ आश्विन २०७५, बिहीबार १५:२१
महोत्तरी–जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ब्रोडगेज रेलसेवाको सफल परिक्षण गरेसँगै दुई महिनाभित्र रेल सञ्चालनले निरन्तरता पाउने भएको छ । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ब्रोडगेज रेल मंसिर महिनावाट सञ्चालनमा ल्याउने निर्माण पक्षको दाबी छ ।
परिक्षण सञ्चालन स्वरुप भारतको झारखण्डबाट रेल्वे लिकमा प्रयोग हुने गिट्टी ‘ब्लास्ट’ बोकेको ५३ र्याकसहितको रेल बुधबार जनकपुर आएको थियो । कर्था जनकपुर जयनगर रेल्वे अन्तर्गत जयनगरबाट जनकपुरसम्म र्याकमा राखिएको ‘ब्लास्ट’ झार्दै रेलले परिक्षण सञ्चालन पुरा गर्यो । कुर्थासम्म रेल्वे सञ्चालनका लागि स्टेशन लगायतका पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ब्रोडगेज रेल सञ्चालनमा आएपछि जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटरको दूरी आधा घण्टामा पुग्न सकिने छ ।
कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरा हुँदै जयनगरसम्म रेल पुग्न थप एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । तत्कालिन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भारत भ्रमणको क्रममा जयनगर जनकपुर रेलमार्ग स्तरउन्नती गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि जयनगर जनकपुरमा न्यारोगेज रेल सञ्चालनमा आएपनि मर्मत संभारमा भएको वेवास्थाले बन्द भएको थियो ।